रोल्पाका ७२ मध्ये २ वडामा महिला अध्यक्ष - लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
'अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसम्मत भएन, अदालतले निर्णय सच्याउनु पर्छ । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरू उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि !'
निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र साथमा काठमाडौंलाई मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्गसमेत बनिरहेको भन्दै निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प निजगढ नै भएको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्चले सीमित व्यक्तिहरूले दिएको निवेदनको आधारमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको आरोप लगाए ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसकेको र त्यहाँको वतावरण मास्नुपर्ने आवश्यकता अहिले नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले विमानस्थलका लागि जंगल फँडानी गर्ने काम पहिल्यै भइसकेको र अहिले त्यहाँ बसेको बस्तीलाई सारेर विमानस्थल निर्माण गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरू देशको विकासको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई महसुस नगरिकन नै गरिएका निर्णयहरूले गर्दा नेपालको विकासमा बाधा पर्दै आएको हो ।
कताकता अदालतका निर्णयहरू विकासका लागि बाधक बन्दै आएको पहिलेका उदाहरण पनि छन् । अहिलेको उदाहरण पनि त्यो रुपमा आएको छ,' उनले भने, 'किनभने अहिले जुन वातावरणको कुरा गरिएको छ । वन संरक्षणको कुरा अघि ल्याइएको छ; मैले घटनास्थलमै गएर हेरेको छु, अब एयरपोर्ट बनाउनका लागि एउटा रुख पनि काट्नुपर्दैन, अलरेडी वन सकिइसकेको छ । बस्ती बसिसकेको छ । वन मासेर बस्ती बसिसकेको छ । अब त्यो बस्तीलाई सारेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु छ ।'
अदालतको निर्णय र विमानस्थल निर्माणको धरातलीय यथार्थता मेल नखाने पौडेलको भनाइ थियो । 'यो अदालत, कानुन, अक्षर मात्रै हेरेर अदालतले निर्णय गर्दा त्यहाँको रियालिटीसँग मेल खाएन । त्यहाँको यथार्थतासँग मेल खाएन । यो फैसला सरासर अवास्तविक भयो । अन्यत्र भनिएको छ । तर यो ठाउँमा अर्बौंको बजेट लगानी गरेर फास्टट्र्याक बनाएर काठमाडौंलाई जोड्ने, र त्यो ठाउँमा ठूला जहाजहरू त्यहाँ आएर सहजै अवतरण गर्न सक्छन्,' उनले भने, 'अर्को कुरा काठमाडौंको एयर ट्राफिकको जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट त्यसले मात्रै राहत दिन्छ । त्यो समस्याको निकास निजगढको एयरपोर्टले नै दिन्छ । काठमाडौंको उच्चतम विकल्पको रुपमा निजगढ बाहेकको ठाउँ छैन । यो नै उपयुक्त ठाउँ हो, त्यहाँ लगेर खुरुक्क डोजर लगाएर एयरपोर्ट बनाउन थाले हुन्छ, रुख काट्न जानै पर्दैन ।'
निजगढ विमानस्थलमा कति रुख काट्ने भन्ने विषयमा अनावश्यक चलखेल भइरहेको पनि पौडेलको भनाइ थियो । 'यो चलखेलको कुनै आवश्यकता छैन । चलेखललाई रोक्नुपर्छ । यो विवेकसम्मत निर्णय होइन । बाँकी जंगललाई तारबारले बाँधेर जोगाउनुपर्छ । अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसम्मत भएन; अदालतले निर्णय सच्याउनुपर्छ,' उनले भने, 'सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरू उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि ! जंगल बचाउन प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ । मिलेमतोमा देशको सारा जंगल तस्कर गराउनु भएन ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा बाँकी रहेको जंगललाई जोगाउन सरकार सक्रिय रहनुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले देशको विकासको बाटोमा ठूलो अफ्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने बताए ।
सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भनेर आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १४:०२